WOWOW Ganacsi Weeye Saabuun Aan Taataba Lahayn - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha Sensor / WOWOW Saabuun Bixiyaha Taabasha La 'Ganacsiga
Qalabka saabuunta dareeraha ee otomaatikada wuxuu si otomaatig ah iyo tiro ahaanba u nadiifin karaa dareeraha maydhista gacmaha marka aad dhaqayso gacmaha, wuxuuna u isticmaali karaa dareeraha saabuun inuu ku nadiifiyo gacmaha adigoon taaban, kaasoo ah mid aad u habboon oo nadaafad leh.
Dispenser Saabuun aan taaban
Sababo la xiriira masiiboyinka, sida dillaaca COVID-19 tusaale ahaan, waxaan ogsoonahay in caafimaadkeenu yahay mid jilicsan oo aan markasta ilaalinno nadaafadeena si aan u jirran. Iyo in aan lagu qaadsiin kuwa kale. Gaar ahaan meelaha caamka ah, waa inaan si buuxda uga warqabin nadaafadda, iyo in qalab la helo si looga hortago virus ama bakteeriyada inay ku faafto. Sheyga badanaa la taabto, sida jaranjarooyinka iyo tubbada biyaha, waa in badanaa la nadiifiyaa si looga ilaaliyo jeermiga. Inta lagu jiro aafada masiibada waa inaad ka wada fogaataa inaad gacan qaadid. Laakiin waxaas oo dhan, waxaa muhiim ah inaad gacmahaaga dhaqdid marrar badan. Markaad gacmahaaga dhaqayso jeermiska, bakteeriyada wax yar ayey iska beddeleysaa inay ku faafto oo aad qof ku xanuunsato ama fayras ku qaadsiiso.
WOWOW waxaan daryeeleynaa caafimaadka oo wax soo saarkeena had iyo jeer waxaa loogu talagalay caafimaadkaaga iyada oo ah ujeedada ugu weyn. Taasi waa sababta aan ugu talagashay inaan u adeegno saabuun saabuun aan taabasho lahayn si aan kuu siino raaxo buuxda iyo dariiqooyin loogu talagalay shaqaalahaaga iyo macaamiishaada, iyo hab nabdoon oo looga hortago fiditaanka viruska iyo bakteeriyada.
Bixiye saabuun aan taabasho lahayn oo leh dareeraha-cas
Goobaha dadweynaha waxaad jeceshahay inaad ka hortagto inaad taabato wax kasta oo gacmahaaga qaawan si aad uga fogaato taabashada jeermiska. Taasi waa sababta WOWOW ay u siiso saabuun aan taabasho lahayn oo ku shaqeeya teknolojiyadda cas-cas. Markaad gacmahaaga ku qabato weelkan saabuunta aan taabashada lahayn, waxaad gacmahaaga ku heli doontaa qayb saxan oo saabuun ah, adoon wax taaban. Marka lagu daro tuubbada aan la taaban karin, waad dhaqi kartaa gacmahaaga gebi ahaanba amaan, adigoon sameynin wax xeelado adag si aad uga fogaato inaad taabato wax.
Qalabka saabuunta ee WOWOW ee aan taabashada lahayn ayaa loo adeegsan karaa meelo kala duwan, sida musqulo ama jikooyin, tusaale ahaan dhismayaasha xafiiska, isbitaallada, bangiyada, suuqyada iyo meelo kale oo badan. Qalabka saabuun ee aan taabashada lahayn ayaa laga sameeyay qalab tayo sare leh si ay ugu sii noolaadaan meelaha dadweynaha. Xitaa adeegsiga gacmo-gacmeedka saabuunkan aan taabashada lahayn ayaa si fudud wax looga qaban karaa. Tan micnaheedu maahan in shirkado badan oo caalami ah ay ku kalsoon yihiin saabuun aan taabasho lahayn ee WOWOW inay xakameeyaan dillaaca COVID-19.
Bixiye saabuun aan taabasho lahayn oo taabasho la'aan ah
Marka ugu horeysa ee saabuuntaan aan taabashada lahayn ayaa loo sameeyay saabuun. Laakiin waad isticmaali kartaa nooc kasta oo dareere ah oo ku jira miisaska shey-guduudka dareeraha-guduudan. Waxaad ku buuxin kartaa jeermis-dile, gacmo-nadiifiye, dareere weelka lagu maydho, ama xitaa wejiga kareemka qoraxda. Waxaad xitaa ku siin kartaa laba saabuun oo aan taabasho lahayn, tusaale ahaan mid saabuun gacanta ah iyo mid kale oo jeermis dile ah. Tan waxaad ugu deeqdaa macaamiishaada iyo shaqaalahaaga raaxada ugu badan. Ugu yaraan waad ku kalsoonaan kartaa inaad sameysid inta ugu badan oo aad iskudaydo inaad ka hortagto cudurada faafa iyo bakteeriyada inay faafo.
Fidiyaha saabuun aan taaban ayaa markii hore loo sameeyay isticmaalka ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ku adeegsan kartaa dirsaddan iswada ee gurigaaga sidoo kale. Maaddaama aad rabto in qoyskaagu ahaado mid amaan ah oo caafimaad qaba, oo leh saabuuntaan taabasho-la'aanta ah, waxaad tan ka sii fududayn kartaa. Ama waxaad ku buuxin kartaa saabuun ama jeermis-dile, sida caadooyinkaagu yahay. Maaddaama saabuuntaan taabashada taabashada lahayn ee leh naqshad yar, waxay ku habboonaan kartaa jikada iyo musqusha kasta. Waxay xitaa ku siineysaa taabasho wanaagsan tikniyoolajiyadda casriga jikadaada ama musqusha adigoon ku mashquulin dhul badan.
Naqshadeeyaha saabuunta bilaa taabashada ah
Qalabka saabuunta bilaa taabashada ah ee WOWOW ayaa ku habboon oo nadiif ah maadaama aad si otomaatig ah u dhaqi kartid gacmahaaga adigoon waxba taaban taabashada markii aad codsaneyso saabuun ama gacmo nadiifiye. Ka sokow, saabuunkan aan taabashada lahayn ee dareemayaasha tooska ah leh wuxuu leeyahay qaali iyo naqshad is wada. Kaliya kuma keydineyso boos, laakiin sidoo kale waa shey qaabeyn wanaagsan oo labada goobood oo dadweynaha ah sida gurigaaga. Saabuuntaan taabashada taabashada lahayn ayaa runtii ku biirin doona sumcadda shirkaddaada shirkad casri ah oo danaynaysa macaamiisheeda, shaqaalaha iyo caafimaadka.
Naqshadeynta ka sokow, WOWOW waxay sidoo kale si fiican uga fikirtay shaqeynta saabuunkan taabashada aan taabashada lahayn. Fududaynta adeegsiga ayaa dabcan ah faa iidada ugu weyn ee adeeg-bixiyeyaha iswada. Laakiin qalabka saabuunta bilaa taabashada ah ee dhibaatada ugu weyn leh ayaa ah in la bixiyo qaddarka saxda ah ee dareeraha ah, iyada oo aan wax daadad ahi daadin. Xalka fidinta saabuunta aan dhaq dhaqaaqa lahayn ee saabuunta WOWOW wuxuu nidaamiyaa xaddiga dareeraha wuxuuna ka hortagaa inuu ku dhibto. Sidaa darteed daawada saabuunta aan taabashada lahayn ee WOWOW waxay kaa caawineysaa inaad ka hortagto jeermiga inuu ku faafo ugu badnaan raaxada macaamiisha, oo aan qashin la'aan.
Soosaariyaha saabuunta aan taabashada lahayn ee taabashada taabashada WOWOW ee saabuun aan taabashada lahayn ayaa leh naqshad laba-koronto ah, maaddaama lagu awoodin karo midkood baytariyada ama awoodda DC. Tani waxay ka dhigeysaa saabuun aan taabasho lahayn oo adeegsi u saaxiib ah isla markaana lagu rakibi karo si dhakhso badan, xitaa iyadoo aan lahayn darbi ka ag dhaw. Waxaad si fudud u qodaysaa god yar oo ku yaal dusha dusha sare, oo waad ku rakibi kartaa saabuunkan taabashada aan taabashada lahayn iyada oo aan wax dhibaato ahi dhicin. Jikada musqusha hoosteeda waxaad ku bedeli kartaa sahayda dareeraha si fudud, umana muuqan karaan cidna. Sidan habka loo yaqaan 'esthetics' wax dhibaato ah ugama dhinna wax kasta oo waxaad ku deeqi kartaa adeeg buuxa adeeg-bixiyeha saabuun yar ee aan taabashada lahayn.
Sida alaabada oo dhan, WOWOW waxay isticmaashaa teknoolojiyad tayo sare leh oo wax ku ool ah si ay u soo bandhigto alaabo tayo sare leh. Iyo sababta oo ah soo iibsiga wax ku oolka ah iyo geedi socodka wax soo saarka aadka u otomaatiga ah, WOWOW waxay ku siin kartaa saabuun saabuun aan taaban oo qiimo macquul ah ku kacaya. WOWOW waxaan ku faraxsanahay badeecadeena iyo tayada aan u fidino macaamiisheena adduunka oo dhan. Sidaa darteed waxaan kalsooni ku qabnaa inaan ku siino 5 sano oo damaanad qaad ah. Haddii qalabkaaga saabuunta taabashada lahayn uusan u shaqeyn doonin sidaad u maleyneyso inuu qabanayo, waxaan bedeli doonnaa qalabkaaga saabuunta aan taabashada laheyn wax dhibaato ah.
Ka sokow, WOWOW waxay bixisaa 90-maalmood oo lacag celin dammaanad ah. Haddii aadan jeclaan doonin saabuunkan taabashada taabashada lahayn sabab uun, waxaan si fudud kuugu soo celin doonaa iyadoo aan wax su'aalo ah lagaa weydiinin. Sidan ayaad u qaadan kartaa tikniyoolajiyadda sahanka ah ee heerka sare ah si aad uga fogaato infekshannada iskutallaabta ah ee aan khatar lahayn haba yaraatee. Maxaad sugaysaa
Fadlan nala soo xiriir marka aad rabto inaad dalbatid tiro aad u sareysa saabuunkeena taabashada aan taabashada lahayn si ay kuu siiyaan qiimo dhimis.
Faa'iidooyinka saabuun aan taabasho lahayn oo ku faafinaya si kooban:
• Tiknoolajiyad casri ah oo infrared ah
• Waxaa lagu buuxin karaa midkood saabuun, jeermis dile ama fayadhowrka gacanta
• Naqshad casri ah
• Waxqabad sare
• Isticmaalka ganacsiga iyo guriga labadaba
S & A ee Qalabka Saabuunta otomaatiga ah:
(1) S: Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaysan u baahnayn baytariyada.
J: Waad dooran kartaa korantada AC, uma baahna baytariyada.
(2) S: Sidee tani ugu xirmi kartaa saabuunta "il" ama dhalada saabuunta? Ma lagu xidhi karaa dhalo weyn oo fadhida sagxadda golaha wasiirrada?
J: Dhalada caadiga ah waa 1L, oo ​​si toos ah loogu laalaado santuuqa koontaroolka. Waxaan sidoo kale haynaa 5L dhalo, laakiin xamuulka Mareykanka loo qaadayo ayaa aad uga qaalisan. Waxaad ka iibsan kartaa dhalooyinka gudaha USA si waafaqsan shuruudahaaga. Waxaan kaliya u baahanahay inaan dheereyno dhuumaha u dhexeeya dhalada iyo sanduuqa kontoroolka. Labada 5L iyo 10L waa la isticmaali karaa, waana la dhigi karaa dhulka.
(3) S: Waa maxay cabirka godka ay u baahan tahay? Horaanba u haystay dalool mashiinka wax lagu shubo miiskayga.
J: Cabirka godka: 25-35mm.
SKU: Dispenser-Soap Dispenser-2 Categories: Qasabadaha Musqusha Sensor, Qubeyska Musqusha Tags: Dareemaha Dhaqdhaqaaqa, Saabuun Fooming taabasho la'aan ah
Naxaas, Chrome, Dareeraha dareeraha ah
WOWOW Automatic Sop Dispenser Wall Mount